रिलिजको मुखमा कता हराइन् ‘रानी’ ? « Ramailo छ
रिलिजको मुखमा कता हराइन् ‘रानी’ ?
पछिल्लो समय फिल्म र प्रचार एक अर्काका परिपुरक जस्तै मानिदैं आएका छन् । फिल्मसँग सम्बन्धित मुख्य कलाकारहरु प्रचार प्रसामा जुट्ने गर्दछन् । फिल्मको इनिसियल व्यापारलाई प्रचार प्रसारको पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । तर कात्तिक २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘रानी’ भने प्रचार प्रसारबाट केही पर भएजस्तो देखिएको छ ।
प्रचार तिव्र होस् पनि कसरी फिल्मकी मुख्य पात्र रानी अर्थात् नायिका जोशी नै देशमा छैनन् । कार्यक्रमको सिलसिलामा मलिना यसै साता अमेरिका उडेकी छिन् । उनी ‘रानी’ रिलिजपछि मात्रै नेपाल फर्किनेछिन् । दुई नव नायकहरु आ-आफ्नै तवरले गरिरहेका छन् तर पुग प्रचार भने भएको छैन् । त्रिकोणात्मक प्रेम कथा बोकेको फिल्म रानीमा मलिनासँगै दुई नव नायकहरु मनिष सुन्दर श्रेष्ठ र सारुक ताम्राकार मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । मलिना, मनिष र सारुकसँग रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
तीन जनाको प्रेममा कलाकार अनुपविक्रम शाही भिलेनको भूमिकामा प्रस्तुत छन् । दयाराम दाहाल निर्देशित फिल्मलाई भानु महर्जनले निर्देशन गरेका हुन् । मलिना, मनिष र सारुकसँग रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :